Home Opinion Reer Xamarku ma Xumaanta Somaliland oo Keliya ayay Arkaan?
Muuqaalladii argagaxa lahaa markii lagu baahiyey warbaahinta kala geddisan, arrintaasi waxay keentay in shacabka Somaliland oo aan wax badan hubsani uu si ballaadhan u dhaleeceeyo ugana horyimaaddo, waxaa fursaddaas ka faa’iidaystay shacabka iyo siyaasiyiinta Somalia oo nasab cay iyo aflagaaddo isugu darayey shacabka Somaliland, qaarkood Yuhuud ayay ku sheegeen, qaarkood gaalo ayay ku tilmaameen, qaarkood waxay ku sifeeyeen ereyada ugu xun.
Xukuumadda Somaliland waxay dhegeysatay shacabkeeda, waxay albaabada u furtay qaxootigii, waxayna keentay in madaxweynuhu booqdo Qaxootigii Soomaalida ahaa, Siyaasiyiinta Somaliland qaarkood si qaawan ayay u cambaareeyeen, haddaba shacabka somaliland ee sida weyn ula qiirooday reer Xamarka iyo inta somaliland neceb waxaan marti uga ahay inay iiga soo jawaabaan suaalahan?
Weli mala hayaa cid ka tirsan reer Xamarka oo u mahadnaqday shacabka Somaliland? weli baraha bulshada ma ku aragteen cid ka hadlaysa go’aannada bini’aadanimo ee xukuumadda Somaliland qaadatay? Somaliland waxay qaabilaysay qaxooti u dhashay Soomaliya tan iyo dagaalladii muqdisho ka dhacay sannadkii 2006, weli ma aragteen qaxooti soomaaliyeed oo somaliland u mahadnaqaya?
Iminka dekedda berbera waxaa laga soo dejiyey illaa 5000 oo qaxooti ah, laakiin 4 qoys ayaa 2 saacadood wax ka yar la hakiyey, Somaliland waxaa lagu gumeeyey maxaad qoysaskaas u hakiseen, miyaad weli aragteen reer Xamar ka hadlaya in Madaxweynihii Somaliland booqday qaxootiga Soomaalida, oo weliba Somaliland ambabixisay dhammaan qaxootigii Somalia u dhashay? Yuusuf Garaad iyo siyaasiyiinta la midka ahi waa kuwii shalay lahaa Somaliland way gumowday oo jawaab ayaa laga sugayaa ee maanta muxuu u odhan waayay Somaliland wax wanaagsan ayay qabatay?
Shacabkayga aan jecelahay waxaan leeyahay yaan laga faa’iidaysan caadifaddiina iyo kalgacalka idinku jira, haddii Somaliya ay bini’aadanimo iyo gobnimo taqaano miyaanay dadkani ahayn kuwii ay qaxiyeen? imisa haweena ayaa Xamar lagu kufsadaa oo ajnebi ku kufsadaa? aaway bini’aadantinimada la idiinku faanayaa? haddii Xamar ay taqaan bini’aadantinimo maxay u jeclaan waayeen wanaagga ee ay xumaha u jecel yihiin.